Dowladda Kenya oo Soomaaliya ugu hanjabtay iney cunaqabateyn saari doonto – Somali Top News
Dowladda Kenya oo Soomaaliya ugu hanjabtay iney cunaqabateyn saari doonto
February 21, 2019 Somali Top News	0 Comments
Wasiirka arrimaha dibedda Kenya, Monica Juma ayaa shaaca ka qaadday inaysan waxba iska beddeli mowqifka Kenya ee ku aaddan “muranka xuduudda badda” ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Hadalkeeda ayaa yimid maanta kadib markii madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta uu guddoomiyey shir golaha wasiirada dalkaas ay yeesheen oo la isku raacay tallaabooyin ay tahay in la qaado, si loo xaliyo xiisadda kala dhaxeysa Soomaaliya, islamarkaana loo ilaaliyo dhulka Kenya.
Monica Juma ayaa sheegtay in ficillada dowladda Soomaaliya ee “dhulka la isku haysto” ay yihiin kuwa aan wanaagsaneyn.
Juma ayaa tiri “In inkasta oo dowladda Soomaaliya ay soo saartay bayaan ay ku diiday eedeymaha Kenya, haddana way caddahay inaysan beenin jiritaanka qariirad muujineysa in xirmooyinka shidaal ee la xaraashay ay yihiin kuwa Kenya.”
Juma waxay ku dooday in kiiska hor-yaalla maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda ee ICJ eek u saabsan dhul-badeedka labada dal ay isku hayaan, ay Soomaaliya ku sheegtay inay ilaalineyso xuduudaheeda, taasina ay caddeyn u tahay in Soomaaliya aysan aqoonsaneyn xuduudda ay Kenya dooneyso.
“Xitaa hal mitir oo dhul ay Kenya keedahay ugama tagi doonno dowlad kale” ayey tiri Monica Juma.
Juma ayaa sheegtay in Kenya ay weli Soomaaliya ka sugeyso jawaab faah-faahsan oo ku saabsan arrimaha Kenya ay ka walaacsan tahay, islamarkaana Kenya ay isku dayeyso inay is-xakameyso oo ay ka bad-badin.
“Dalalka dunida waxay go’aanno ka adag kuwii aan qaadannay u qaateen wax ka yar arrimaha aan ka walaacsannahay” ayay tiri.
Ayada oo warbaahinta caawa kula hadleysay Nairobi ayay sheegtay inay jiri karto cunaqabateyn Kenya ay saarto Soomaaliya, taasi oo ku xirnaan doonta jawaabta dowladda Soomaaliya ay ka bixiso “xuduudda lagu muransan yahay”
Waxa ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka doonayaan in sharaxaadda ay siineyso Kenya ay qeyb ka ahaato raali-gelin ay siiso Kenya.
← Shirweynaha hannaanka dhab-u-heshiinta Qaran oo war-murtiyeed laga soo saaray
Madaxweynaha Kenya oo golohiisa wasiirada kala hadlay arrimaha Soomaaliya →
Warar dheeri ah oo laga helay dil ay Muqdisho ka fuliyeen kooxo hubeysan
Talyaaniga oo Balanqaad u sameeyay Ciidankan Booliska Soomaaliyeed
September 29, 2018 Somali Top News 0
Dilalka Loo Geysto Ganasatada Soomaaliyeed Ee Dalka Koofur Africa Oo Xargaha Goostay